galmudugnews.com » DAAWO+Ra,iisal wasaare Gaas oo balan qaaday inuu xushmaynayo Diinta kirishtaanka:
Home » WARARKA » DAAWO+Ra,iisal wasaare Gaas oo balan qaaday inuu xushmaynayo Diinta kirishtaanka: DAAWO+Ra,iisal wasaare Gaas oo balan qaaday inuu xushmaynayo Diinta kirishtaanka: galmudug on
No Comment Views 16754Intiini horay ula socatay maxaa ka taqaana Taarikhda Ra,isulwsaraha Soomaaliya, C/weli Maxamed Cali gaas ayaa maanta waxaa idin jeclaanay in idiin soo bandhigno muuqaal cadaynayo C/weli gaas oo leh hala xushmeeyo diimaha kirishtaanka:.
,Muuqaalkaan waxaa uu cadeyn u yahay intiina horay ula socatay warbaxinti Ku saabsaneed in C/weli gaas ka ahaa Macalim ama bare jaamacad aay leeyahiin dad kirishtaan ah.
,Link warkii hore iyo jaamacada sida aay ku shaqayso, oo aan soo bandhignay todobadi hore waxaa kala dagi kartaa qeebta hoose.
cadeyn in cabdi weli ka shaqeyn jiray
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21018 hitsContact US - 19679 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15778 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15365 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13954 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13901 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13823 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13624 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11810 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11794 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11741 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11534 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11508 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11365 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11229 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11172 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11064 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11063 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10822 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10449 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10359 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10334 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10025 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10015 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9792 hits Home About